विलासी बन्दै यौन व्यापार - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २४, २०७८ समय: १९:५३:३६
२४ वर्षीया उपमा (नाम परिर्वतन) को कथा केही फरक छ । स्नातकसम्म अध्ययन गरेकी उपमाले आमाको पाठेघरमा पलाएको ट्युमरको उपचार गराउन एउटा फाइनान्समा रिसेप्सनको जागिर सुरु गरेकी थिइन् । जागिर थालेको एक हप्ता पनि नबित्दै उनी फाइनान्समा नियमित आउने एक ग्राहकसँग नजिकिइन् । ती ग्राहकले उनलाई एकपटकका लागि २५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरे । त्यत्रो पैसा पाइने भएपछि उपमा लोभिइन् । ती ग्राहकसँग नियमित सम्पर्क हुन थालेपछि अन्य त्यस्तै ग्राहकसँग पनि उनको सम्पर्क हुन थाल्यो । मासिक ११ हजार रुपैयाँको रिसेप्सनको जागिरमा लागेकी उपमाले यौन व्यवसायबाट एक दिनमै १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी कमाउन थालेपछि उनको मन यतै भुलियो भने एक महिनामै आमाको उपचार खर्च पनि जुट्यो । आमाको उपचारपछि उनी फाइनान्सको जागिर छाडेर यही व्यवसायमा केन्द्रित भएकी छिन् ।
रमेश (४१ वर्ष) (नाम परिवतन) एक निजी विद्यालयमा गार्ड छन् । बिहान ८ बज्दा नबज्दै रमेश श्रीमती रेश्मा (नाम परिवर्तन) अनि १० वर्षीया छोरीलाई लिएर एउटै स्कुटरमा हुइँकिन्छन् । श्रीमतीलाई रत्नपार्कमा छोडेर उनी छोरीलाई विद्यालय पुर्‍याउँछन् । बेलुका उनी प्राय: त्यही रुट हँुदै श्रीमतीलाई लिएर घर फर्कन्छन् । धेरैलाई लाग्ला, रेश्मा रत्नपार्कमा दिनभर के गर्छिन् त ? रत्नपार्क त रेश्माका लागि ‘ग्यादरि·जक्सन’ मात्र हो । त्यहाँ उनी ग्राहकसँग सम्पर्क गर्छिन् र कुनै सुरक्षित स्थानमा गएर त्यस दिनको कमाइको जोहो गर्छिन् । यौनकर्मी महिलाहरूको स्वास्थ्य तथा उनीहरूको मानवअधिकारका सम्बन्धमा वकालत गर्ने एक संस्थामा भेटिएकी रेश्मा यौन व्यवसायमा बाध्यताले लाग्नुपरेको कुरा बताउँछिन् ।
राजधानी काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा यौन व्यवसाय मौलाउँदो अवस्थामा छ । निश्चित उमेर समूह वा निश्चित लिंग, निश्चित वर्ग मात्र यौन व्यवसायमा संलग्न छन् भन्ने छैन । अधिकांश बाध्यताले यो दलदलमा फसेका छन् भने कतिपय रहरैरहरमा यो पेसामा तानिएका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३ लाखभन्दा बढी यौनव्यवसायी छन् । तीमध्ये ५४ हजारभन्दा बढी महिला काठमाडौंमा सक्रिय रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय यौन तथा एचआईभी एड्स रोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ । केन्द्रले हालै यौन पेसामा संलग्न हुनेहरूको एकीकृत तथा जैविक सर्वेक्षण (आइबिबीएस) गरेको थियो, जसले अचम्म लाग्दो तथ्यांक पनि निकालेको छ ।
काठमाडौंका ५ सय यौनकर्मी महिलामा गरिएको उक्त सर्वेक्षणअनुसार ६६ प्रतिशतभन्दा बढी यौनकर्मी विवाहित छन् । सर्वेक्षणमा उनीहरूमध्ये कतिपयले श्रीमान् पनि आफूसँगै रहेको र कतिपयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको जवाफ दिएका थिए । सर्वेक्षणमा संलग्न करिब १७ प्रतिशतले आफू अविवाहित रहेको जवाफ दिएका थिए भने १४ प्रतिशतले पारपाचुके गरी बसेको बताएका थिए । ५ सयमध्ये ३ दशमलव ४ प्रतिशतले आफू विधवा भएको बताएका थिए । सर्वेक्षणमा संलग्नमध्ये ६६ प्रतिशत महिला विवाहित देखिए पनि सबै विवाहित खुलेर अगाडि नआउने हुँदा यो संख्या अझ बढी हुन सक्ने अनुमान सर्वेक्षकहरूको छ ।
गौरीजस्ता अविवाहित युवती मात्र होइन, विवाहित महिलाहरू पनि बाध्यताले यो दलदलमा फसेका छन् । परिवार पाल्न बाध्य भएर यौन व्यवसायमा संलग्न हुनेदेखि छोराछोरीको विद्यालयको शुल्क तिर्न यो पेसामा लाग्नेहरूसम्मको कुनै कमी छैन । श्रीमान्लाई घरखर्च उपलब्ध गराएर उनीहरूकै कमाइमा घरबार जोड्नसम्म भ्याएका यौनकर्मी पनि उत्तिकै छन् । केन्द्रले गरेको सर्वेक्षणमा पनि आफ्नै घरव्यवहार भएका यौनकर्मीको संख्या उल्लेख्य देखियो । सर्वेक्षणमा सामेल हुनेहरूमध्ये अधिकांश विवाहित छन्, सर्वेक्षकसमेत रहेका नेसनल इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्चका निर्देशक टेकराज भट्ट भन्छन्—कतिपय श्रीमानसँगै छन् भने कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका श्रीमती हुन् । सर्वेक्षणमा १६ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १८ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र देखिनु भनेको अन्य प्राय: विवाहित नै हुनु भएको उनको बुझाइ छ ।
अशिक्षित बढी, १४ प्रतिशत उच्च शिक्षित
असुरक्षित यौनसम्पर्क गर्नु भनेको निश्चित रूपमा यौनरोगको भारी बोक्नु भएको राष्ट्रिय यौन तथा एड्स रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे बताउँछन् । अझ यौन जोखिममा रहेका समूहसँग गरिने यौन सम्पर्कमा कन्डम लगाउने भन्दा अन्य विकल्प नभएको डा. पाण्डेले बताए । उता यौनकर्मी महिलाहरू भने ग्राहकले कन्डम लगाउनै नमान्ने बताउँछन् ।
यौनकर्मी महिला कहाँ जाँदा कन्डमलाई बेवास्ता गर्नु कन्डम यौनरोगबाट जोगाउनेभन्दा पनि सन्तान उत्पादन रोक्ने साधन मात्र हो भन्ने सोचाइको परिणाम भएको डा. पाण्डेको तर्क छ । यसरी ग्राहकले कन्डम प्रयोग गर्न अस्वीकार गर्ने अवस्थामा यौनकर्मी महिला आफैंले कन्डम तयारी अवस्थामा राख्नेदेखि अन्य विधिहरू प्रयोग गर्दै आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । ५ सय मध्ये ३ सय ४६ जनामा बहुसाधन परिवार नियोजनका साधन प्रयोगसम्बन्धी गरिएको अध्ययनमा ७९ प्रतिशतले कन्डम प्रयोग गर्ने कुरा (तर सधैं होइन) बताएका थिए भने ४२ प्रतिशतले वीर्य बाहिर स्खलन गराउने विधि अपनाउँदै आएको बताएका थिए ।
कन्डम प्रयोग नगरेकै कारणले विगतका वर्षको तुलनामा यो वर्ष एचआईभी एड्सको संक्रमण भएका महिला यौनकर्मीमाको संख्या वृद्धि भएको अधिकृत तिवारी बताउँछिन् । यो वर्ष यो ट्रेन्ड बढेर २ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ । २०११ मा १ दशमलव ७ रहेको यो तथ्यांक २०१५ मा २ प्रतिशत पुगेको थियो ।
तथ्यांकले पनि के पनि देखाउँछ भने पैसा नतिरी यौनसम्पर्क गर्ने १८ प्रतिशत नियमित ग्राहकले मात्र कन्डम लगाउँछन् भने पैसा तिरेर आउने नियमित ग्राहकमध्ये ३८ प्रतिशतसँग बिना कन्डम नै यौनसम्पर्क हुन्छ । ३७ प्रतिशत यस्ता ग्राहक कन्डम नलगाई यौनसम्पर्क गर्न रुचाउँछन् ।
कति कमाउँछन् ?
यद्यपि सबैको कमाइ प्रमिलाको जस्तो कुस्त नै छ भन्ने छैन । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये कतिपयले हप्तामा १ हजार रुपैयाँ समेत कमाउन हम्मेहम्मे पर्ने बताएका थिए । त्यसैगरी १ हजार रुपैयाँसम्म कमाइ हुन्छ भन्ने ७ प्रतिशत थिए भने १ देखि २ हजार रुपैयाँसम्म कमाइ हुने १५ दशमलव २ प्रतिशत थिए । २ देखि ३ हजार रुपैयाँ कमाइ हुने १५ दशमलव ८ प्रतिशत, ३ देखि ४ हजार रुपैयाँ कमाइ हुनेहरूको संख्या ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यस्तै सातामा ४ देखि ५ हजार रुपैयाँ कमाइ हुने १९ दशमलव, ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँ कमाइ हुने २२ प्रतिशत तथा १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने ११ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार एक यौनकर्मी महिलाले हप्तामा औसत ५ हजार रुपैयाँ कमाउँछन् ।
सर्वेक्षणमा सहभागी महिलाहरूका अनुसार उनीहरूका धेरै ग्राहक कुनै न कुनै व्यवसायमा संलग्न छन् । उनीहरू दलालमार्फत सम्पर्कमा आउने गरेका छन् । यस्ता ग्राहकमध्ये अधिकांश आफ्नो परिचय खुलाउन चाहदैनन् । कन्ट्रयाकमार्फत आउने २४ दशमलव ६ प्रतिशत छन् भने सोझै सम्पर्कमा आउनेहरूको संख्या पनि सोही हाराहारीमा छ । त्यसपछि यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने १७ दशमलव ४ प्रतिशत छन् । अन्य रोजगारीमा रहेका १३ दशमलव ८ प्रतिशत तथा सुरक्षा निकायमा काम गर्ने ५ दशमलव २ प्रतिशत छन् । बसाइँसराइ गरेर आउने ३ दशमलव ८ प्रतिशत, उद्योगमा काम गर्ने ७ दशमलव २ प्रतिशत, विदेशमा कार्यरत २ दशमलव ६ प्रतिशत तथा विद्यार्थी १ प्रतिशत छन् ।
यसरी आउने ग्राहकसँग ४५ दशमलव १ प्रतिशत महिलाले दिनमा एक जनासँग मात्र सम्पर्क गर्छन् । त्यसैगरी ३० दशमलव ७ प्रतिशतले २ जना, १५ दशमलव ६ प्रतिशतले ३ जना तथा ८ दशमलव ६ प्रतिशतले चार वा त्यसभन्दा बढीसँग (एक दिनमा) यौनसम्पर्क गर्ने कुरा बताएका छन् । उनीहरूमध्ये १३ दशमलव ४ प्रतिशतले प्रत्येक दिन मादक पदार्थ सेवन गर्ने जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै ८ दशमलव ६ प्रतिशतले हप्तामा १ पटक, ३१ दशमलव ६ प्रतिशतले हप्तामा २ देखि ३ पटक, १० दशमलव ८ प्रतिशतले हप्तामा १ पटकभन्दा कम तथा ३६ दशमलव ४ प्रतिशतले कहिल्यै रक्सी सेवन नगर्ने कुरा बताएका छन् । साभार श्राेतः कान्तिपुर साप्ताहिकबाट